निर्मलाका पोस्टर टाँस्ने र च्यात्नेबीच देशभर जुहारी, लाखौ पोष्टर छाप्ने आर्थिक स्रोत के ? – www.agnijwala.com
निर्मलाका पोस्टर टाँस्ने र च्यात्नेबीच देशभर जुहारी, लाखौ पोष्टर छाप्ने आर्थिक स्रोत के ?
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्माको पोष्टरहरु राजधानी काठमाडौंका सडक पोलहरुका टाँसियो । प्रधानमन्त्रीको पोष्टरलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विरोध मात्र भएन, निर्मला पन्तका पोष्टर रातारात निर्माण गरी प्रधानमन्त्री विरुद्ध काउन्टर पोष्टर टाँसियो र लेखियो, सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन ।
प्रधानमन्त्रीले पोष्टरमै लाखौ खर्च गरेको भन्दै समाजिक सञ्जालमा आक्रोस पोख्नेहरु यतिबेला निर्मला पन्तका पोष्टर बोकि नयाँ बसपार्कतिर दौडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको पोष्टरमा लाखौ खर्च भयो तर अब अर्काे प्रश्न, प्रधानमन्त्रीको भन्दा धेरै पोष्टर निर्मला पन्तका छापिए । पोष्टर छाप्ने खर्च कहाँबाट आयो ?
निर्मलाका पोष्टर बोकि नयाँ बसपार्कमा हिडेका एक युवाले भने -यति धेरै पोष्टर छाप्ने रकम कहाँबाट आयो भन्नु भन्दापनि निर्मलाले न्याय पाइन की पाइनन् भन्ने कुरा ठुलो हो ? उनले पोष्टर कहाँबाट र कसरी आयो ? त्यो भने खुलाउन चाहेनन् । प्रधानमन्त्रीका पोष्टर राजधानीका सडक पोलमा सिमित छन् भने निर्मलाका पोष्टर देशभरी नै पठाइएको छ ।
निर्मला पन्तका पोष्टर देशभरका सडक पेटीहरुमा टाँस्ने र च्यात्ने यतिबेला जुहारी नै चलेको छ । मंगलवार देशका प्रमुख शहरहरुमा निर्मला पन्तका पोष्टरहरु एक समुहले टाँस्दै गयो भने, प्रहरीले च्यात्दै गयो ? कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले नै पोष्टर टाँस्न नदिने निर्णय गरयो । कास्कीको पोखरामा टाँसिएका पोष्टरहरु प्रहरीले हटायो ।
त्यसैगरी दाडको तुलसीपुरमा पनि पोष्टर टाँस्ने र प्रहरीबीच जुहारी नै चल्यो, एक समुहले पोष्टर टाँस्दै गयो, प्रहरीले च्यात्दै हिड्यो । कतिपय स्थानमा महिलाले मूर्दाको संकेत गर्दै सडकमा सुतेर विरोध जनाए ।